अमेरिकाको महङ्गो उच्च शिक्षा र आर्थिक सहायता – Durbin Nepal News
अमेरिकाको महङ्गो उच्च शिक्षा र आर्थिक सहायता
पुस ३, २०७६ ३:०७ मा प्रकाशित
अमेरिकामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा अनिवार्य एवम् निःशुल्क भएता पनि कलेज लेभलको पढाई निकै महङ्गो छ । दि हिल नामक एक पत्रिकाका अनुसार सेनसस् व्यूरोको पछिल्लो आँकडा अनुसार २५ वर्ष भन्दा माथिका अमेरिकनहरु मध्ये जम्मा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत सँगमात्र ४ वर्षे ब्याचलर्स डिग्री र केवल ९ दशमलव ३ प्रतिशत सँगमात्र त्यो भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता छ ।
यसमा विभिन्न कारण होला तर कलेजको महङ्गो शुल्क एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । तसर्थ अधिकांश विद्यार्थीहरु हाई स्कूल सकेपछि औपचारिक शिक्षालाई पूर्ण बिराम लगाउछन् । के न्यून आय भएका विद्यार्थीहरुका लागि कलेज लेभलको पढाई निकै जटिल छ त? अध्ययनलाई निरन्तरता दिन केही विकल्पहरु छैनन् र? छन् भने के कस्ता किसिमका सुविधाहरु छन् ? यस आलेखमा कलेज लेभलका विद्यार्थीका लागी दिइने फाइनान्सीयल ऐड अर्थात वित्तिय सहायताको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।
यस अलेखमा प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भ आधिकारिक नभई यसको बारेमा केवल जानकारिका लागि मात्र विभिन्न स्रोत÷समाग्रीहरुको आधारमा समिक्षा मात्र गरिएको हो ।
के हो फाइनान्सीयल ऐड अथार्त आर्थिक सहायता ?
फाइनान्सीयल ऐड अर्थात आर्थिक सहायता भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुख्यत हाई स्कूल पछिको अध्ययनलाई प्रोत्सहान गर्न विद्यार्थीको लागि दिइने आर्थिक सहायता हो । यसले कलेज लेभलको अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुको शुल्क तिर्नको लागि विद्यार्थी या तिनको परिवारलाई आर्थिक सहायता गर्दछ ।
मुलत, विद्यार्थीहरुको कलेज शुल्क, पुस्तक तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक समाग्रीहरु, यतायता शुल्क, अलग प्रकृतिले सवल विद्यार्थीहरुको अन्य शुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरुको लागि दिइने आर्थिक सहायता हो ।
के सबै विद्यार्थीहरु यसका लागि योग्य हुन्छन् त ?
हो अमेरिकी कलेजमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरु, अमेरिकी नागरिक र स्थायी बासिन्दा लगायत गैर नागरिक तथा उनका अभिभावक डकुमेण्टेड हुन या डकुमेण्ट विहिन सबैका लागि यो सहायता उपलब्ध हुन्छ । तर यो सहायता को निरन्तरताको लागि विद्यार्थीले सन्तुष्ट शैक्षिक प्रगति अर्थात स्याटिस्फ्यकट्री एक्यडमिक प्रग्रेस (एस.ए.पी) भने कायम राख्नु पर्दछ । उदाहरणको लागि न्यूनतम सी ग्रेड अर्थात ७३ देखी ७७ प्रतिशत सम्म कायम राख्नु पर्दछ । तर यो भने कलेज र विषय अनुसार फरक हुन पनि सक्दछ ।
कस्ता विद्यार्थी योग्य हुन्छन् त आर्थिक सहायताका लागि ?
वित्तिय सहायता प्राप्त गर्नका लागि यसका केही मापदण्डहरु छन् । जुन मापदण्ड भित्र पर्ने जो कोही पनि वित्तिय सहायतका लागि योग्य हुनेछन् । यहाँ केही अति आवश्यक मापदण्डका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता, न्यूनतमा हाइ स्कूल डिप्लोमा या जी.इ.डी (जेनेरल एडुकेसन डिभलपमेण्ट टेष्ट) हुनु पर्दछ। दोश्रो, विद्यार्थीको कानुनी हैसियत, नागरिक, स्थायी बासिन्दा या विशेष अवस्थाका अन्य विद्यार्थी सबै सँग वैध सामाजिक सुरक्षा नम्वर (सोसल सेक्युरिटी नम्वर) हुनु पर्दछ । तेश्रो विद्यार्थी कुनै कलेजमा या विषय अध्ययनको लागि भर्ना भएको या भर्ना स्वीकृत भएको हुनु पर्दछ । चौथो एवम् महत्व पूर्ण भने परिवार को आम्दानीको अवस्था ।
हुन त कम आम्दानी भित्र पर्नेले मात्र वित्तिय सहायता पाउने र धेरै आम्दानी हुने ले नपाउने भन्ने निश्चित सिमा त छैन तथापि पारिवारिक आम्दानीको विवरण भने यो सुविद्या लिनको लागि अनिवार्य रहन्छ । आम्दानीका आधारमा वित्तिय सहायता फरक फरक हुन सक्दछ । पाँचौं विद्यार्थीको चारित्रिक इतिहास, असल चरित्र भएको विद्यार्थीहरु मात्र यसका लागि योग्य हुन्छन् ।
कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त यो आर्थिक सहायता ?
हरेक कलेजमा फाइनान्सीयल ऐड विभाग रहेको हुन्छ । सवन्धित विद्यार्थीले यो विभागमा गएर यसको बारेमा पूर्ण रुपमा जनकारि लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । कलेजमा भर्ना स्वीकार भई सके पछि विद्यार्थीहरु यो विभागमा गई सम्पूर्ण प्रकृयाको बारेमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । जानकारि पश्चात विद्यार्थीले “फ्रि एप्लिकेसन फर फेडेरल स्टुडेन्ट ऐड” अर्थात फाप्सा (एफ.ए.एफ.एस.ए) को फर्म भरेर तोकिएको समयवधी भित्र फाइनान्सीयल ऐड विभागमा बुझाउनु पर्दछ ।
न्यून आम्दानी तथा महङ्गो शुल्कका कारण नेपाली लगायत अधिकाँश आप्रवासी विद्यार्थीहरु जसको शैक्षिक स्तर राम्रो छ तर पनि हाइ स्कूल उत्तिर्ण हुन साथ कलेज गई उच्च शिक्षा हासिल गर्न भन्दा रोजागारी तर्फ अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ । यो समस्या नेपाली समुदायमा पनि देखिन्छ । विभिन्न कलेजमा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक शुल्क बहन गर्ने अनेकन प्रकारका आर्थिक सहायताको प्रावधानहरु रहेको हुन्छ ।
यसर्थ हरेक विद्यार्थीहरुले कलेजमा रहेको फाइनान्सीयल ऐड डिर्पाटमेण्ट वा ब्रुर्सस अफिसबाट यसको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । हरेक अभिभावकले पनि हाई स्कूल सक्नासाथ आफ्न बच्चालाई काममा होइन कलेजमा जान प्रेरित गर्नु पर्दछ । स्मरण रहोस, सेनसस् व्यूरो २०१७ को एक आँकडा अनुसार हाई स्कूल डिप्लो होल्डर घर मुली भएको घरको औषत वार्षिक आय ३६ हजार ७ सय ९५ डलर छ भने ब्याचर्लस डिग्री होल्डर घरमुली भएको घरको औषत वार्षिक आय १ लाख ४७ हजार ५ सय ७८ डलर छ ।
यो तथ्याँङ्कले पनि अमेरिकी बजारमा शैक्षिक जनशक्तिको राम्रो भविष्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ, अमेरिकामा कलेज शिक्षा महङ्गो भएता पनि त्यसलाई सहज बनाउने विभिन्न सहायताहरुको व्यवस्था केन्द्रिय सरकार या राज्य सरकारले गरेको छ । यसका बारेमा जानकारी लिई, महङ्गो उच्च अध्ययनलाई सस्तो र सहज बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित योर्क कलेजका प्राध्यापक हुन् । )